Dyslexia na mmụta Bekee - Ọzụzụ Cognitive
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » DSA » Dyslexia na ịmụ Bekee
Ndi otu ndi American Psychiatric Association na akowaputa dyslexia dị ka nsogbu mmụta nke e ji edepụta okwu na-ekwu nwayọ ma na-ezighi ezi, ya na idekọ ihe isi ike na ọkwa okwu (APA, 2013).
Na mkpokọta, ụmụaka na ndị na-eto eto nwere nsogbu n'asụsụ ala ha (L1) kwenyere na ha ga-enwe ụdị nsogbu ahụ n'asụsụ nke abụọ (L2). Otu n'ime ihe yiri ka ọ na-ekwu maka nnweta okwu na L1 na L2 bụ ebe nchekwa, ọkachasị "akụkụ" akụkụ nke ebe nchekwa na arụ ọrụ dịka articulatory akaghị . Ọzọkwa, nghọta nke asụsụ yiri ka ọ na-arụ ọrụ dị mkpa: ụmụaka ndị na-amụ asụsụ ọma (dị ka Bekee) na-egbu oge karịa ndị na-amụ asụsụ nghọta.
Ọmụmụ nyocha nke Fazio na ndị ọrụ ibe (2020)  na nso nso a gbalịrị ịza ajụjụ ndị a:
Studentsmụ akwụkwọ Dyslexic nke struggletali na-adọga ịmụ asụsụ Bekee n'ihe banyere ịgụ na ide?
Kedụ ụzọ usoro ihe ịma ihe na-emetụta mmụta nke Bekee e dere ede?
Ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze na-emetụta mmụta nke asụsụ Bekee edere dị ka asụsụ nke abụọ na ụmụaka nwere ọnụnọ na anọghị nhịahụ.
Omumu ihe omumu a, nke emere banyere 90 umuaka dyslexic (ma e jiri ya tụnyere ndi ochichi 90), kowara ihe ndia:
Dyslexic ụmụaka na-agbasi mbọ ike ịmụ asụsụ abụọ. Karịsịa, ndị ọsọ nke ịgụ okwu n'asụsụ ittali ọ dị ka ọ nwere ihe jikọrọ ikike iji L2
La ebe nchekwa na-emetụta izizi nke ịgụ okwu na ọ bụghị okwu, mgbe ikike ịtụnanya na-emetụta ma izi ezi nke okwu na ọgụgụ na-enweghị okwu na ike ịrụ ọrụ okwu. N’uche nke a, ikike uda oku na ikike uda oku n’ozuzu oke na-emetuta izizi nke ihe ogugu na igu akwukwo n’Igbo. Thatzọ ndị na-eduga na enweghị ntụpọ na ịgụ na ide na L2 yiri ka ọ na-adabaghị na L1 na dyslexics.
Site na nyocha nke ndị mgbanwe na ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze ọ dị ka ọrụ nna na ọkwa ụlọ akwụkwọ nke nne na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịmụ asụsụ nke abụọ. Ihe odide mbu ga - ekwekọ na izi ezi na ọgụgụ okwu na abụghị okwu; nke abụọ kwekọrọ na izi ezi na ọsọ nke ọgụgụ okwu, yana kwa iji ọgụgụ ede.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Ọgụgụ PDF, ede na ịgbakọọ mgbatị mgbatị
Na mmechi, maka ụmụ akwụkwọ examinedtali nyochara, akụkụ abụọ nke neuropsychological (dịka ụbụrụ na-arụ ọrụ na ikike ịkpọ oku) yana ndị mmekọrịta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-akwado usoro mmụta nke asụsụ abụọ.
 Palladino, P., & Ferrari, M. (2008). Phomụaka nwere ọgụgụ isi na ncheta ụmụaka nwere nsogbu asụsụ mba ọzọ. Ebe nchekwa, 16, 604-625.
 Fazio D, Ferrari L, Testa S, et al. Ihe isi ike ịmụ asụsụ abụọ n’ime ụmụaka withtali nwere nsogbu ịgụ akwụkwọ [bipụtara ntanetị n’ihu mbipụta, 2020 Apr 17]. Br J Mmụta Psychol. 2020
bilingualism, dyslexia, ọgụgụ, asụsụ nke abụọ
Dyslexia na ịmụ Bekee2020-07-182020-07-18http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/07/line-art-children-5386523_960_720.png200px200px